Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata oche nkwagharị | Ụlọ ọrụ na -ebuli oche nkwagharị nke China
Ebube nkwagharịbụ atụmatụ pụrụ iche maka ndị nwere nkwarụ na nkwalite nkwarụ nwere ike inyere gị aka ndị a nwere nkwarụ na -arịgo steepụ n'ụzọ dị mfe. Ngwa a na-anabata sistemụ njikwa nwere ọgụgụ isi, ọtụtụ akụkụ, modular na sistemụ njikwa netwọkụ nwere ike hazie data na-atọ ọchị, na-eme ka sistemụ arụmọrụ mbuli kwụsie ike.
Ndị na -ebubata oche nkwagharị ihe China na -eji ebe obibi na ọnụ ahịa akụ na ụba
Ezubere nkwalite oche nkwagharị kwụ ọtọ maka ndị nwere nkwarụ, nke dabara adaba maka oche nkwagharị iji rịgoro na steepụ ma ọ bụ n'elu steepụ ịbanye n'ọnụ ụzọ. N'otu oge ahụ, enwere ike iji ya dị ka obere igwe mbuli elu ụlọ, na -eburu ndị njem atọ wee rute: ịdị elu nke 6m.
Ọ bụrụ na ebe nrụnye gị enweghị ohere zuru oke iji wụnye nkwalite oche nkwagharị kwụ ọtọ, mgbe ahụ ụdị wiresị oche nkwagharị ga -abụ nhọrọ kacha mma. Ọ kacha dabara maka iji ya na ebe nwere saịtị nrụnye pere mpe. E jiri ya tụnyere ebuli oche nkwagharị kwụ ọtọ, oche nkwagharị ahụ dị mkpa
N'otu oge ahụ, a na -eji igwe ndọta magnet na -adịgide adịgide synchronous gearless traction, nke na -eme ka ọnụego ụlọ dị mma yana arụmọrụ ịnya igwe nke igwe mbuli elu. A na -ahazi voltaji ọkọnọ ike ma kwekọọ dị ka voltaji mpaghara nke onye ahịa. Breeki diski arụnyere na-eme ka ọrụ mbuli elu dị nchebe, olu ya pere mpe karịa isi injin ọdịnala n'okpuru otu ibu ahụ, na akara akara ahụ adịghị achọ mmanu mmanu mmanu. Ọ bụrụ na ịchọrọ nkwalite nkwarụ a, biko nye anyị nha tebụl akọwapụtara, ibu na ogo ya, yana foto nke ebe nrụnye akọwapụtara nke ọma, anyị ga -ahazi ndị nrụpụta ọkachamara ka hazie ma hazie dịka mkpa gị siri dị.